I-Motorola Moto One isungulwe ngokusesikweni eSpain | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UEder Ferreño | | Motorola
I-Motorola Moto One yifowuni yokuqala ye-Android yokuqala. Imodeli enikezelwe ngokusesikweni ekupheleni kuka-Agasti, kwaye ungafunda okungakumbi malunga nayo apha. Emva kokwaziswa, abasebenzisi babejonge phambili ekusungulweni kwayo kwintengiso. Kwaye ngoku lithuba leSpain, apho isixhobo sele sisungulwe ngokusesikweni.
Kwiphepha sifumana ibanga eliphakathi elifikelela khuphisana neemodeli ezinje ngeXiaomi Mi A2. Ke le Motorola Moto One idibana nabantu abakhuphisana nabo abanamandla. Kodwa ifowuni inokukwazi ukuthengisa kakuhle.
Abo banomdla wokuthenga le fowuni eSpain abayi kulinda ixesha elide. Oko yasungulwa kwilizwe lethu sele isemthethweni, inokuthengwa ngoku ngokusemthethweni. Iyathengiswa kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso zeefowuni zenkampani, zombini kwiivenkile ezibonakalayo nakwi-intanethi.
Ke, abo banomdla kwi-Motorola Moto One banokuyifumana kuyo iivenkile ezinje ngeAmazon okanye iMediamarkt, Ukongeza uFnac kunye nabanye abaninzi. Ke akuyi kuba nzima kuwe ukufumana ifowuni kwiindawo zentengiso eSpain.
Ixabiso leMotorola Moto One ngama-299 euros. Lixabiso elamkelekileyo kuluhlu oluphakathi kwiklasi yalo, nangona kunokwenzeka ukuba oku kungasebenza ngokuchasene nayo. Kuba abasebenzisi banokubheja kwiinguqulelo ezingabizi kakhulu kolu luhlu, bakwasebenzisa i-Android One.
Nangona iMotorola ikwazile ukubuyela kumgca wokuqala wabavelisi ngokuthengisa okungcono ngakumbi. Ngoku kunjalo kulindeleke ukuba le Moto Moto One incede oku kwanda kwintengiso. Kuya kuba ngumdla ukubona indlela abathengi baseSpain abayifumana ngayo. Ucinga ntoni malunga noluhlu oluphakathi kunye ne-Android One?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » I-Motorola Moto One ifika eSpain
Ungazikhubaza njani izaziso zosetyenziso kwi-Android
I-retro shoot 'em phezulu kunye ne-Pocket Invader kwi-Android yakho